१२ सय सवारीसाधन मात्र दर्ता यात्रु, चालक र तेस्रो पक्षको बीमा पोलिसी तयार काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट खारेज भएको १ वर्ष पुगे पनि आम यात्रुले भने यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यातायात दर्ता र सञ्चालनमा सहज वातावरण बने पनि आम यात्रुको हैरानी यथावत् नै छ । सरकारले...
वैशाख १७, काठमाडौं (अस) । एक पटक सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) लिइसक्नुभएको छ र त्यसमा अरु कुनै सवारीको वर्ग (क्याटेगोरी) थप गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो लेख लाभदायक हुनसक्छ । हामीले ‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने प्रक्रिया’ शीर्षकको लेखमा पहिलो पटक लाइसेन्स लिने प्रक्रियाको बा...
यामाहा एफजीएस एफआई भी ३.०
नयाँ स्टाइल यामाहा एफजी सिरिजको नयाँ मोटरसाइकल एफजीएस एफआई भी३.० आकर्षक अपडेटसहित नेपाली बजारमा आएको छ । अघिल्लो पुस्ताझैं नयाँ एफजीएस एफआई भी३.० पनि यामाहाको बिग बाइकबाट प्रभावित छ । योपटक भने नयाँ मोटरसाइकल यामाहा एफजी२५ बाट बढी प्रभावित छ । नयाँ मोटरसाइकल पहिलो पुस्ताको एफजीबाट प्रभावित देखिन्छ ।...
विराटनगरमा चार आकाशे पुल बन्दै
विराटनगर (अस) । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी असार मसान्तभित्र चारओटा आकाशे पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नगरक्षेत्रमा चारओटा आकाशे पुलको आवश्यकता रहेको भन्दै असार मसान्तभित्रमा यसको निर्माण थालिने बताएका हुन् । साथै एउटा स्वागतद्व...
टुटललाई ३ करोड ३९ लाख कर तिर्न आदेश
काठमाडौं (अस) । सरकारले टुटललाई रू. ३ करोड ३९ लाख कर तिर्न आदेश जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले कर छलीको आरोपमा कम्पनीलाई उक्त रुपैयाँबराबरको कर तिर्न सोमवार आदेश दिएको हो । विभागका प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार आदेश जारी गरिएको ६० दिनभित्र टुटलले कर तिर्नुपर्छ । कार्यालयको आदेश...
निगमका प्रवक्ताबाट हटाइए क्याप्टेन लामा
काठमाडौं । निलम्बनमा परेका क्याप्टेन विजय लामालाई नेपाल वायु सेवा निगमको प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उनलाई प्रवक्ताबाट नहटाएसम्म उडान गर्न नदिने पत्र पठाएपछि निगमले जिम्मेवारीमुक्त गरेको हो । प्रवक्ताबाट हटाइएपछि भने निलम्बन फुकुवा भएको छ । गत चैत २० मा नि...
काशीराम बजगाईं काठमाडौं । नेपालमा भेहिकल एसेम्बल गर्न दर्ता भएका उद्योग २० पुगेका छन् । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नेपालमा चारपांग्रे सवारी एसेम्बलका लागि लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन प्रालि दर्ता गरेसँगै उक्त संख्या २० पुगेको हो । लक्ष्मीले रू. ५ अर्ब १० कर...
काठमाडौं । ब्याट्रीविना अहिलेको गाडी वा मोटरसाइकल प्रयोगविहीन हुन्छ । ब्याट्रीविनाको सवारीसाधनको कल्पना नै हुँदैन । गाडी स्टार्ट गर्न नभई नहुने ब्याट्री बिग्रिएमा तनाव हुन्छ । ब्याट्रीको हेरचाह गर्न सकिएन भने अप्ठ्यारो ठाउँमा र रातिको समयमा ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ । गाडी वा मोटरसाइकलमा भएको ब्याट्रीक...
नेपालका लागि हिरो मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता हिरो मोटोकर्पले गत मंगलवार सार्वजनिक गरेको नयाँ स्कुटर हो हिरो डेस्टिनी १२५ । कम्पनीका अनुसार आइडल स्टार्ट स्टप सिष्टम (आईथ्रीएस) प्रयोग गरिएको यो पहिलो स्कुटर हो । १२५ सीसी डिस्प्लेसमेन्ट भएको यस स्कुटरमा ४ स्ट्रोर्क एयर कुल्ड एसआई इन्जिन राखिएको छ, जसल...
एक्सल गाडीमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण पार्ट हो । यो फलामको मोटो तथा खोक्रो डण्डीले बनेको हुन्छ । यसले गाडीको सम्पूर्ण भार थाम्ने र गाडीलाई चालमा ल्याउने काम गर्छ । एक्सल सस्पेन्सन सिस्टमलाई ड्राइभिङ टर्कलाई ट्रान्समिशन गर्ने र गाडीलाई नियन्त्रणमा राखिराख्ने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ । एक्सलअनुसार गाड...